Akwụkwọ Adịgboroja - Zụta Akwụkwọ Adịgboroja Online | Dọkụmentị ụwa
Zụta Akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala yana ndị ọzọ n'ịntanetị
Zụta Akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala
Zụta ID Kaadị
Zụta Asambodo IELTS
Tinye Maka Ọrụ
Zụta Asambodo Ndi ozo
- Họrọ - Zụta UK Obibi Card Na-arụ ọrụ na Canada Akwụkwọ ikike ndị Canada Zụta Asambodo IELTS Zụrụ Asambodo Mbido Ikike Zụta Kaadị Azụmahịa UK Zụta kaadị German Zụta Akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala Zụta Akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala USA (steeti niile dị) AKW CKWỌ OZI EGO AKELKỌ IELTS EGO NDUKWU JOB NA CANADA Zụta Paspọtụ Netherlands Netherlands Zụta Asụsụ Mba Ndị Na-akwọ ụgbọala Zụrụ Paspọt ndị China Ederede Zụta Akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala Canada Zụta kaadị Polish ID Zụta Akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala German Zụta kaadị Italian Zụta Akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala Swedish Zụta Diplomas Zụrụ Ikikere Dritali Ikikere .tali Nweta njem nleta EU Mba dị mfe Chazụta Akwụkwọ ikike ọkwọ ụgbọala nke Hungarian Zụta Real Fake American Green Card Zụta Lisence Real UK onye ọkwọ ụgbọ ala Zụta Asụsụ Swedish Ndị Ikike Zụta Akwụkwọ ikike ịkwọ ụgbọala Romanian Kaadị NJ Zụta Akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala nke Onye Belgium Zụta Paspọtụ Korean Korean Zụta Akwụkwọ ikike ịnya Spanish Zụta Paspọtụ Eshia Zụta Akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala Polish Zụta ngwugwu zuru ezu maka mba EU Zụta Akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala French Zụta Kaadị Adịgboroja Ama Zụta Akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala Austrian Zụta kaadị German Zụta Akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala Portuguese Zụta kaadị Eshia Asia Zụta Akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala Norwegian Zụta ezigbo TOFL Tinye akwụkwọ maka Akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala Bulgarian Zụta Asambodo Ezigbo Di na Nwunye Nweta Akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala Netherlands Tinye akwụkwọ maka visa USA na Canada Zụta Akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala Danish Itinye akwụkwọ maka UK Visa Zụta Siga Switzerland Asambodo Ikikere / Asambodo Sita Switzerland Schoollọ akwụkwọ na Canada Zụrụ akwụkwọ ikike US USA Iwu Mba nke EU Bi na Zụta ezigbo Paswọdu Canada Akwụkwọ ikike ndị Italiantali Zụta Paspọtụ EU Mba ndị dị n’Eshia nwere ikike Zụta Paspọtụ UK UK Zụta UK Obibi Card AKWỤKWỌ IKIKE ỊNYA ỤGBỌ ALA
NDUKWU JOB NA CANADA
AKW CKWỌ OZI
Zụta Akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala USA (steeti niile dị)
Zụta Asụsụ Mba Ndị Na-akwọ ụgbọala
Zụta Akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala Canada
Zụta Akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala German
Zụta Akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala Swedish
Zụrụ Ikikere Dritali Ikikere .tali
Chazụta Akwụkwọ ikike ọkwọ ụgbọala nke Hungarian
Zụta Lisence Real UK onye ọkwọ ụgbọ ala
Zụta Akwụkwọ ikike ịkwọ ụgbọala Romanian
Zụta Akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala nke Onye Belgium
Zụta Akwụkwọ ikike ịnya Spanish
Zụta Akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala Polish
Zụta Akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala French
Zụta Akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala Austrian
Zụta Akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala Portuguese
Zụta Akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala Norwegian
Tinye akwụkwọ maka Akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala Bulgarian
Nweta Akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala Netherlands
Zụta Akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala Danish
Zụta Siga Switzerland Asambodo Ikikere / Asambodo Sita Switzerland
Zụrụ akwụkwọ ikike US USA
Zụta ezigbo Paswọdu Canada
Zụta Paspọtụ EU
Zụta Paspọtụ UK UK
Zụta Paspọtụ Netherlands Netherlands
Zụta Paspọtụ Korean Korean
Zụrụ Paspọt ndị China Ederede
Zụta Paspọtụ Eshia
Zụta Kaadị Azụmahịa UK
Zụta ngwugwu zuru ezu maka mba EU
Zụta kaadị Polish ID
Zụta Kaadị Adịgboroja Ama
Zụta kaadị German
Zụta kaadị Italian
Zụta kaadị Eshia Asia
Zụta ezigbo TOFL
Zụta Asambodo Ezigbo Di na Nwunye
Zụrụ Asambodo Mbido Ikike
Tinye akwụkwọ maka visa USA na Canada
Nweta njem nleta EU Mba dị mfe
Itinye akwụkwọ maka UK Visa
Na-arụ ọrụ na Canada
Schoollọ akwụkwọ na Canada
Zụta Real Fake American Green Card
Iwu Mba nke EU Bi na
Akwụkwọ ikike ndị Canada
Akwụkwọ ikike ndị Italiantali
Zụta Asụsụ Swedish Ndị Ikike
Mba ndị dị n’Eshia nwere ikike
Zụta UK Obibi Card
IJI AKW REKWỌ AK LK RE B RER RE AKALKỌ AK |KỌ AK |KỌ | AK FKỌ BAKER DR LB LRIC IMETA | Kaadị AJ SCKA SCANNABLE | Fake ID Card | AK PRR RE EGO REGISTERED | FASHE PASSPORT | EGO NA-EKWU OKWU | AKWYKWỌ AKIDKỌ AK BUKỌ B |BARA | ANAKEKWU MARRIAGE | AKW IKWỌ AH IREL EGO NA-EGWU NA EGO.
Na akwụkwọ ụwa, anyị bụ ọgbakọ mepere emepe nke edenye aha na nke adịgboroja ndị mepụtara gburugburu ụwa. A na-egosipụta ọnụ ọgụgụ zuru ụwa ọnụ nke mmepụta ọnwa kwa ọnwa n'okpuru. A na -eme ọnụ ọgụgụ ahụ mgbe niile site na ọnụ ọgụgụ ọhụụ kwa ọnwa. Ndị ahịa na-etinye weebụsaịtị a ma dabere n'ihe ha chọrọ, anyị na-ekpebi ụlọ ọrụ na-ahụ maka arịrịọ ha. Ọtụtụ ụlọ ọrụ nwere ike itinye akwụkwọ maka isonye na nzukọ a. Agbanyeghị, anyị na-akwado ngwa mgbe onye na-arịọ arịrịọ wepụtara akwụkwọ atọ mbụ wee kwụọ ụgwọ ndị otu ha. Akwụkwọ ndị anyị nyere gụnyere akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala adịgboroja, paswọọdụ adịgboroja adịgboroja, id nke adịgboroja, akwụkwọ ikike adịgboroja nke adịgboroja, akwụkwọ alụkwaghịm di na nwunye, zụta akwụkwọ IELTS edebanyere aha, diplọma ndị adịgboroja, wdg.
Statistics nke ọnwa Maka Septemba 2019:
Paspọtụ n'ụwa niile
Akwụkwọ ikike ịkwọ ụgbọala
Asambodo na ndi ozo
Ikike ikike obibi
Ezigbo ID kaadị adịgboroja
Mara: Akwụkwọ ụwa niile enweghị ike biputere eserese onyonyo na webụsaịtị anyị makana ozi ndị ahịa na-echekwa nzuzo. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ka paspọtụ, akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala, wdg ga-adị ka ya, kpọtụrụ anyị, anyị ga-akpọtụrụ otu n'ime ndị ahịa anyị iji nweta ikike izitere gị akwụkwọ ha ka ha hụ.
KWES RERAL AKW |KWỌ | KWES DRR DR IVB DRR DR N'LLỌ EGO
Ndị na-eji okporo ụzọ eme ihe n’ụwa niile na-eji ikike ịnya ụgbọ ala kọwaa onwe ha. Akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala na-akọwapụta ụdị ụgbọ ala enwere ikike ka ọ rụọ ọrụ. Agbanyeghị, ọtụtụ nsogbu na-ezute ụwa niile n'inweta akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala. Akwukwo zuru ụwa ọnụ na-enye ngwangwa dị ọnụ ala maka ndị dị njikere ịzụta akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala. Iji nwee ike idozi nsogbu a zuru ụwa ọnụ, anyị na akpachara anya na-akpakọrịta ndị anyị bụ ndị gosipụtarala onwe ha site n'inye akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala na mpaghara oge niile.
Ọzọkwa, ndị anyị na ha na-arụ ọrụ gụnyere ihe karịrị 132 ndị na-anya ụgbọala ụlọ akwụkwọ, ndị ọrụ mmanye iwu na ndị isi ụgbọ njem. Na mgbakwunye na nke a, anyị na ndị otu anyị nwere aha ọma anyị nyere ikike ịnwe ikike ịnya ụgbọ ala site n'aka ndị ọrụ anyị site na ịdebanye aha ha n'akwụkwọ ndekọ data gọọmentị. Dịka ọmụmaatụ, na UK, anyị na-edebanye aha maka DLA na DVLA. Zụta ezigbo ikike ịnya ụgbọ ala n'ịntanetị site na akwụkwọ ụwa niile site na itinye naanị ebe a. Enweghị nchekasị nke ịnya ụgbọ ala, enweghị ichere maka ọnwa, ọ nweghị nkwụsị. Gbọala n'ụzọ iwu.
APPLỌP FORR FOR MAKA NA-EKWU NDLINE NA-EGO
Iji nweta ikike ịnya ụgbọ ala n'aka gị, ị ga-emerịrị ya kpọtụrụ anyị site na webụsaịtị a ka otu ndị ahịa anyị duzie gị ka ị tinye n'ọrụ site na anyị Mpempe akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala. Cheta ịhọrọ n'ụdị ngwa ọ bụrụ na ịchọrọ ezigbo akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala ma ọ bụ akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala adịgboroja.
NSO ANYA NA AKW REKWỌ AKWALKWỌ AKW ANDKWỌ AKW ANDKWỌ B ANDR AND
E debanyere aha ikike ịnya ụgbọ ala sitere na akwụkwọ ndekọ zuru ụwa na ọdụ data gọọmentị ga-adị na sistemụ nyocha ọ bụla. Site na ezigbo akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala, enwere obi ike na ndenye ego na nkwenye ọbụlagodi ihe ọghọm.
N’aka nke ọzọ, akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala adịgboroja yiri ezigbo akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala. Agbanyeghị, edeghị ozi nke akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala adịgboroja na nchekwa data gọọmentị ọ bụla. Nke a pụtara na onye ọrụ nke ikikere ọkwọ ụgbọala adịgboroja agaghị agafe usoro nyocha ọ bụla na-achọghị. Ndị mmadụ na-azụta ikikere ọkwọ ụgbọala adịgboroja n'ihi na ha dị ọnụ ala, a na-ejikwa ha n'ime obodo.
MYTA AKWALKWỌ AKWALKWỌ AKW |KWỌ | Welie PASSPORTS ONLINE
Nwere ike nweta ezigbo paspọtụ n'ịntanetị n'enweghị nsogbu na ọnụahịa dị ọnụ ala. Nke a nwere ike ime ka njem ndị mmadụ dị mfe na njem ha na njem ndị ọzọ na - eme njem dị mfe. Iji nweta ezigbo paspọtụ n'ịntanetị, naanị tinye ebe a na saịtị a ma dee mpaghara mkpụmkpụ mkpụmkpụ nke ntinye akwụkwọ ahụ na ịchọrọ ezigbo paspọtụ. Na mgbakwunye na nkọwapụta ahụ, kọwaa kpom na ụdị obodo ịchọrọ ka enyefe akwụkwọ ikike ngafe gị.
Anyị na-elekọta ọrụ akwụkwọ niile naanị ihe ị ga - eme bụ inye anyị ozi dị mkpa banyere ihe gbasara ihe dị na - agbakwunye na ụbọchị ịchọrọ nke ga - achọpụta ụbọchị ngafe nke ezigbo paspọtụ gị.
Ọzọkwa, anyị na-enye ndị gọọmentị ikike ngafe nke ruru iwu nchekwa ma gafere usoro nyocha ọ bụla na-agbaso igwe na-agụ ihe.
Na mmechi, a na-emepụta akwụkwọ ikike ngafe anyị, ahazi ya, edebanye aha na nnwale ọfụma nke na ndị ahịa anyị ma jiri ntụkwasị obi jiri njem gaa ụwa na maka ọrụ ebe ọ bụla ha na-aga. Naanị kpọtụrụ ndị ọrụ anyị ka ha duzie gị tinye ezigbo akwụkwọ ikike ngafe gị.
Fzụta ngwungwu NA ONLINE
Akwụkwọ ndekọ nke ụwa na-arụpụtakwa paspọtụ adịgboroja maka ụfọdụ ndị ahịa chọrọ ịzụta akwụkwọ ikike ngafe ma jiri naanị maka nzube. Paspọtụ adịgboroja yiri nnọọ ezigbo paspọtụ, otu àgwà na atụmatụ nzuzo.
Agbanyeghị, ihe dị iche na paspọtụ adịgboroja na ezigbo paspọtụ bụ na mgbe ịzụrụ paspọtụ adịgboroja n'ịntanetị, edeghị ozi paspọtụ adịgboroja na nchekwa data gọọmentị ọ bụla. Ọzọkwa, enweghị ozi paspọtụ adịgboroja na ọdụ data gọọmentị na-eme ka ndị na-ebugharị paspọtụ adịgboroja nwee nsogbu nchekwa na nyocha nke ọdụ ụgbọ elu.
N’ikpeazụ, dịkwa ka ọtụtụ ndị ahịa ga-esi nwee ikike inweta paspọtụ Fake maka ọnụ ahịa ha dị ọnụ ala, anyị na-adụ ha ọdụ mgbe niile ka ha gaa maka ezigbo paspọtụ, n'agbanyeghị na ha dị oke ọnụ karịa n'ihi na ọ dị nchebe iji ebe ọ bụla. Anyị ga-eme nke ọma imelite ndepụta ndepụta ọnụahịa anyị n'ịntanetị. Kpọtụrụ ndị ọrụ anyị site na weebụsaịtị a, ha ga-eduzi gị jupụta fọm akwụkwọ maka paspọtụ adịgboroja.
Zụta AK IDKỌ AJ IDRAL NS ONKỌTA SITE
Ihe odide zuru ụwa ọnụ na-emepụta ezigbo id kaadị. Onweghi ezigbo ID kaadị si n’edemede uwa n’agha. Na mgbakwunye na ahụ ike nke ezigbo kaadị kaadị maka ire ere na weebụsaịtị anyị, anyị na-ahụ na edenye ozi ahụ na sistemụ data gọọmentị ziri ezi. Onweghị ihe ị ga-atụ egwu iwere ezigbo kaadị ID anyị gaa na igwe nyocha nyocha kọmputa. Kpọtụrụ ndị ọrụ anyị site na webụsaịtị a ka ntuziaka ị tinye itinye. Applicationdị ezigbo kaadị kaadị ID.
Z F F ​​ID KA EGO ID kaadị
Kaadị NJ kaadị ezighi ezi zuru ụwa ọnụ bụ otu ezigbo anụ ahụ. N’adịghị ka ezigbo kaadị ID ị na-enweta n’aka anyị, a naghị edenye kaadị ID adịgboroja na ọdụ data gọọmentị. Ya mere, kaadị ID ID adịgboroja a akwadoghị nyocha ihe nyocha nyocha kaadị data ID mi. Iji zụta kaadị ID adịgboroja na sistemụ anyị, kpọtụrụ ndị ọrụ anyị maka nduzi ma tinye ya n'ọrụ site na Mpempe akwụkwọ ID Card adịgboroja.
B RERAL AK RESR RESRID EGO EGO
Zụta ezigbo ikike obibi sitere na akwụkwọ ụwa niile site na "ịzụta ikike obibi" akwụkwọ ngwa. Akwụkwọ ikike obibi anyị na-eme ka ọnụnọ gị bụrụ nke iwu obodo n'obodo ọ bụla masịrị gị. Kaadị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ US dịka ọmụmaatụ bụ otu n'ime ikike obibi obibi ụwa ọnụego ọnụ. Anyị ejikwala njikwa ọnọdụ mbata na ọpụpụ njem gị wee debe iwu maka ịnọ na mba ịchọrọ. Site na akwụkwọ zuru ụwa ọnụ, ị nwere ike ịzụta akwụkwọ ikike obibi mbụ, zụta kaadị GREEN US, ịzụta ikike obibi Canada, ịzụta ikike obibi ndị German, na ọtụtụ ndị ọzọ. Anyị na-ebunye kaadị ndị bi ebe ahụ n'enweghị nsogbu ọ bụla ebe ịchọrọ. Kpoo anyi ma tinye akwụkwọ maka ikike obibi gị HERE.
ZR C AKW REKWỌ AKW ONKWỌ AKW ONKWỌ N'ONLỌ
Akwụkwọ ndị zuru ụwa ọnụ ewetara ndị ahịa nọ na mkpa enyemaka ọtụtụ asambodo na mmekọrịta ọha na eze. Ngwa asambodo agụmakwụkwọ na 2019 bu nke ndị na-etinye akwụkwọ asambodo IELTS n'ịntanetị. Ndị ahịa na-etinyekarị aka ịzụta asambodo ndị British Council ielts na ntanetị, zụta asambodo Cambridge ielts n'ịntanetị, zụta akwụkwọ nhp ielts n'ịntanetị. Anyị n’etinye kọleji na asambodo mahadum, G. mgbakọ na mwepụ, TOFL na ọtụtụ ndị ọzọ. Kpọtụrụ anyị iji chọpụta ma ọ bụrụ na anyị enye asambodo ịchọrọ. Anyị nwere ike ị nyere gị aka inweta ọrụ nrọ gị.
Asambodo mmekọrịta mmadụ na ibe ya nyere n'akwụkwọ ụwa niile gụnyere: asambodo alụmdi na nwunye, asambodo ọnwụ, asambodo ọmụmụ na ọtụtụ ndị ọzọ. Kpoo anyi ka itinye asambodo gi.
ỌR INWE INWE
Akwukwo ozi nke uwa niile siri na netwọko ya siri ike acho icho oru n’uwa nile nke dakọtara na profaịlụ ndi choro. Ndị chọrọ ọrụ mba ofesi na-etinye akwụkwọ anyị Mpempe akwụkwọ ọrụ . Akwụkwọ ndekọ ụwa niile enwetala ọrụ maka ndị ahịa ma hazie akwụkwọ ha iji kpọga ha Canada, UAB, USA, Europe na South Korea. Bulite profaịlụ gị na ndị ọrụ anyị ga-akpọtụrụ gị ma nwee olileanya ịchọta ọrụ egwuregwu maka gị na ebe ịchọrọ. Anyị enwetala ndị ahịa chọrọ ọrụ na mba ụfọdụ naanị iji kwado usoro visa ha. N'ihe banyere Canada, ndị ahịa dị otú ahụ anaghị achọ ọrụ a kwadoro nke LMIA.
Global enweghị ike ịkọwapụta uru dị n'iso ndị ụlọ ọrụ na-emepụta akwụkwọ ndị ọzọ na-emepụta akwụkwọ gburugburu ụwa. Gburugburu ụwa na-enye ndụmọdụ na ụlọ ọrụ ọ bụla ziri ezi nke chọrọ ịgbasawanye mmetụta ya kwesịrị itinye ka ọ bụrụ akụkụ anyị. Anyị ga-edobere gị nkọwa nzuzo yana na nzaghachi, ị nwere ike ị nweta enyemaka site n'aka ụlọ ọrụ ndị ọzọ ọ bụla ọzọ iji hụ na ngwaahịa gị na-agbaso ụkpụrụ dị ugbu a. Na mgbakwunye na nke ahụ, ụlọ ọrụ ndị ahịa na-enweta enyemaka na nnyefe nke ngwongwo iji belata ọnụ ọgụgụ nnyefe ọdịda na-eme ka aha ọma anyị na ibe anyị belata. Iji sonyere nzukọ a, ị na-etinye akwụkwọ site na njikọ njikọ weebụsaịtị a (Denye isonyere) ma gosipụta ike gị site na ịnyefe akwụkwọ atọ nke ọma na mpaghara gị, ị ga-enwerịrị weebụsaịtị nke gị ma emesịa nabata gị, ị ga-akwụ ụgwọ ndebanye aha nke 5000 USD. Anyi na anabatanu anyi.
KWES USR US ANYA.
Ozi gị? *
Mgbe niile n’ozi gị
× Kedu ka m ga-esi nyere gị aka?